वर्ष भरि movie को हर्ष - Khalti
by Rownika Shrestha | Apr 12, 2022 | offers, Ticketing |0comments
साथीहरुलाई movie हेर्न लाग्छु भनेर बाचा गर्नुभएको छ? या नयाँ movie आउन साथ हलमा movie नहेरी चित्तै बुझ्दैन ? यदि त्यसो हो भने तपाईलाई खुसीको खबर किनभने Khalti ले तपाईको लागि ल्याएको छ वर्ष भरि movie को हर्ष अफर।
यस अफर अन्तर्गत तपाईले Khalti बाट Movie Ticket काटी जित्न सक्नुहुनेछ एक वर्ष लाई हुनेगरी १२ वोटा movie टिकटमा लागु हुने Discount coupon। अब वर्षै भरि पाउनुहोस् मौका नयाँ movie हेर्ने, सिधै ठुलो पर्दामा।
वर्ष भरि को लागि Movie Ticket कसरी जित्ने
Khalti बाट वर्ष भरि Movie को हर्ष जित्नका लागि Khalti बाट आफ्नो Movie Ticket किन्नुपर्छ वा Khalti छनोट गरि भुक्तानी गर्नु पर्छ। हरेक हप्ता ५ जना भाग्यशाली बिजेताले Khalti को तर्फ १२ वटा movie coupon जित्ने छन्। यो movie coupon जितेको एक वर्षलाई लागु हुनेछ।
Khalti बाट Movie टिकट कसरी किन्ने ?
यस अफरमा भाग लिनका लागि तपाईले Khalti app वा Khalti.com मा गई तपाईलाई हेर्न मन लागेको movie ticket किन्नु पर्नेछ। अथवा तपाईले कुनैपनि movie hall को उपलब्ध website मा गइ movie छनौट गर्नुहोस् र payment option मा Khalti रोजी भुक्तानी गर्नुहोस्।
तपाईको Movie Ticket बुक हुनुका साथै तपाइँ यस अफरमा भाग लिन योग्य हुनुहुनेछ।
याद राख्न पर्ने कुराहरु :
यो अफर चैत्र २९, २०७८ देखि जेष्ठ २,२०७९ सम्म लागु हुनेछ।
अफरमा भाग लिन Khalti प्रयोगकर्ताको KYC verify हुन अनिवार्य छ।
यो अफर Khalti प्रयोगकर्ता (consumers & POS Khalti Pasal) लाई लागु हुनेछ।
बिजेताले Khalti को तर्फबाट १२ वटा movie को Coupon प्राप्त गर्नुहुनेछ।
प्राप्त भएको Coupon को मूल्य रू.४०० को हुनेछ र सो Coupon Khalti बाट Movie Ticket किन्नलाई प्रयोग गर्न सकिनेछ।
Coupon प्रयोग गरि movie ticket किन्ने प्रयोगकर्ताको KYC verified हुन अनिवारिय छ।
विजेता घोषणा भएको १५ दिन भित्र बिजेताले पुरस्कार दाबी गरिसक्नुपर्नेछ । तोकिएको समय भित्र बिजेताले पुरस्कार दाबी नगरेको खण्डमा उक्त पुरस्कार रद्द गर्ने अधिकार कम्पनीसँग रहनेछ ।
शंकास्पद गतिविधि भएको भेटीएमा योजना रद्द गर्ने अधिकार Khalti ले राख्छ।
खल्तीको Euro 2020 - Support Your Team बाट रू. २५००० सजिलै जित्ने सुनौलो अवसर